Moments Neshamwari 43
Munhu angagona kurarama kuburikidza, kupedzisa mabasa, uye kufa kune humwe hupenyu humwe panguva yaakapiwa makore akawanda pasi pano?
Ehe; anogona. Icho chokwadi chekuzvarwa patsva ndechechokwadi chakapihwa mumubvunzo. Kuberekwazve - sedzidziso, murume iyeye, anotariswa sepfungwa, anouya mumuviri wenyama kuti adzidze zvimwe zvinhu uye kuti aite rimwe basa munyika muhupenyu ihwohwo, obva asiya muviri wake unofa ipapo, uye mushure nguva yaanotora mumwe muviri wenyama, uye imwezve uyezve nevamwe kusvika basa rake rapedzwa, ruzivo rwunowanikwa mukati uye iye apedza chikoro chehupenyu-kuberekwa patsva zvinogamuchirwa zvisingaperi nevaya vakabata dzidziso iyi voishandisa mukutsanangura kusaenzana mune zvese zvese zvevana vevabereki vamwe chete, uye nevarume nevakadzi vavanoziva vanobata nzvimbo dzakasiyana muhupenyu uye vakasiyana mukukudziridza hunhu, zvisinei nekwavo nhaka, nharaunda nemikana.
Kunyangwe yaizivikanwa, asi kwemazana emakore dzidziso yekuzvarwa patsva yave iri yekumwe kune budiriro nedzidziso dzeWest. Sezvo pfungwa dzichiwedzera kujairana nenyaya yacho hazvizobate chete kuberekwa patsva sechirevo, asi ichazvinzwisisa sechaicho, icho nzwisiso inobva yovhura maonero matsva nematambudziko ehupenyu. Mubvunzo unobvunzwa kubva pane imwe maonero pane izvo zvinowanzoiswa. Zvinowanzonzwisiswa kuti kana pfungwa ikave neimwe muviri yemuviri yakagadzirirwa iyo, uye inopinda mumuviri, inongotora iyo muviri uye inoenderera mberi nebasa rayo uye zviitiko apo pfungwa dzakasiiwa muhupenyu hwekupedzisira, semuvaki anowedzera zvimwe zvidhinha avo vaakange arara pabasa rezuva rapfuura, kana saaka accountant anotora pamusoro pechikwereti chake uye zvikwereti pachikamu chemabhuku chaakatora. Izvi zvinoshanda kune ruzhinji, pamwe, rweavo vanogara. Vanouya muhupenyu nemitoro yavo uye vanofamba vachidonha kuburikidza neane hutsinye, semadhongi ane mitoro yavo, kana ivo vanoramba nekumhanyisa mabasa nezvimwe zvese zvakawandisa, uye vanoramba kugamuchira uye kutakura mitoro, semanyurusi anodzika uye kukanda mutoro wavo. uye chero chinouya nzira yavo.
Pfungwa dzakadzidziswa kuMadokero ndeedzakasiyana kubva kune idzo dzeMabvazuva, sekuratidzwa kwesimba rehukama, zvigadzirwa, kuvandudzwa, nzira dzinogara dzichichinja maitiro nezviitiko zvezuva, kuWest. Iko kunetseka uye kusagadzikana kunogona kuve kwakakura ikozvino kupfuura kare; asi nekuda kwekukosha kwakanyanya kwezvinhu zvakanyanya zvinogona kuitwa ikozvino kupfuura zvinogona kuitwa kare.
Nguva nenzvimbo zvakadzika zvinogona kuisa miganhu pabasa remunhu, asi murume anogona kushandisa nguva nenzvimbo munzvimbo dzebasa rake. Murume anogona kupfuura nehupenyu otomatiki, kana iye anogona kusimuka kubva pakuvanzika uye ave ane mukurumbira mutambi munhoroondo yenyika uye ape basa refu kune avo enhau. Nhoroondo yemurume inogona kunyorwa padombo rake seguva achiti: "Pano pane mutumbi waHenry Jinks. Akazvarwa mune ino taundi mu1854. Akakura, akaroora, aive nevana vevana vaviri, akatenga nekutengesa zvinhu, akafa, ”kana nhoroondo inogona kunge iri yeakasiyana, yakadai saIsaac Newton kana Abraham Lincoln. Mumwe anozvibata, uye asingamiriri zvinonzi mamiriro kuti zvimufambise, haana miganho yakamiswa. Kana murume achida kuzviita, anogona kubva pane chimwe chikamu chehupenyu uye kuenda kune chimwe, uye kushanda nechikamu ichocho uye kuenda mune chimwe, sezvakaita Lincoln; uye kana akaramba achishanda, akagadzirira kuita chimwe chinhu munyika uye achitungamirirwa nechinangwa chakanaka, iye achava nebasa rakakura rakamisikidzwa kwaari, nekuita iro iye haazongoiti iro basa rehupenyu hwazhinji nekuda kwake asi achizviitira basa yenyika; uye nokudaro nyika ichave yerubatsiro pachinzvimbo chayo chekusarudzika pachinzvimbo chechipinganidzo kwaari nebasa rake. Izvi zvinoshanda kumunhu wese wevanhu akaita basa uye akapfuura kubva kune chimwe chiteshi chehupenyu kuenda kune chimwe.
Asi kune varume avo, zvisinei nenzvimbo yekuzvarwa kwavo kana chiteshi muhupenyu, vanogara hupenyu hwemukati. Hupenyu hwemukati medu hwemurume hahuwanzo kuenda kune zvinyorwa zveveruzhinji, uye hazviwanzo kuzivikanwa kune vanozivana kwazvo. Sezvo murume angafamba munzvimbo dzakawanda muhupenyu hweveruzhinji, kuwanikwa kweanenge chero angave ehupenyu hwerumwe murume, saka murume anorarama hupenyu hwepamberi mukati mehupenyu hwomuviri mumwe chete haangodzidza izvo zvidzidzo uye nekuita iro basa iro chakaitirwa kuti aifanira kuve muhupenyu ihwohwo, asi anogona kudzidza nekuita iro basa izvo zvingadai zvakamuwanisa kumwe kuberekwa kuti azadzise, ​​kana iye akaramba kana akatadza kuita basa rake rekutanga raakapiwa.
Zvinoenderana nemurume, uye nezvaari kuda kuita. Kazhinji chinzvimbo chemurume kana nharaunda zvinoshanduka nekupedza rimwe basa uye nekugadzirira kutanga rimwe, kunyange zvakadaro hazvisi zvakadaro nguva dzose. Shanduko yega yega yebasa kana chimiro inogona kufananidzira hupenyu hwakasiyana, asi inogona kunge isingagari yakaenzana nebasa rekupfekedzwa kwakazara. Mumwe anogona kuberekwa mumhuri yembavha uye kumanikidzwa kushanda navo. Gare gare iye anogona kuona zvisizvo zvekuba uye arege iyo yekutengeserana yakatendeseka. Angasiya kutengeserana kunorwa muhondo. Anogona kupedzisira apinda mubhizinesi, asi achishuvira kuwana zvisingaenderane nebhizinesi rake; uye anogona kuziva zvakawanda zvaanoshuvira. Shanduko muhupenyu hwake dzingaite senge dzakakonzerwa nemamiriro ezvinhu paakakandwa maari, uye izvi kuti zvakaunzwa netsaona. Asi ivo vaive vasina. Shanduko yega yega muhupenyu hwakadai yakaitwa nemafungiro ake epfungwa. Mafungiro ake epfungwa akagadzira kana kuvhura nzira yekuchiva, saka zvakauyiswa nemukana wekuchinja. Mafungiro epfungwa anounza kana kubvumira kuchinja kwemunhu mamiriro ezvinhu muhupenyu. Nemafungiro epfungwa dzake murume anogona muhupenyu humwe kuita basa rehupenyu hwakawanda.